ရုရှားနိုင်ငံက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အောင်မြင်စွာကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ဟု ပူတင်ပြော - Xinhua News Agency
မော်စကို၊ မေ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် အနောက်နိုင်ငံများ၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ရင်း အခက်အခဲများကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း “အခြေအနေကောင်းမွန်လျက်ရှိသည်ကို” အဓိကကျသည့် မိုက်ခရိုစီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းများအားလုံးကသက်သေပြသလျက်ရှိကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ ဗလာတီမာပူတင်က ဆိုသည်။ပူတင် က ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ သမ္မတ အလက်ဇန္ဒား လူကာရှန်ကိုနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ပင်လယ်နက် ရှိ အပန်းဖြေမြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည့် Sochi မြို့တွင်တွေ့ဆုံစဉ် ထိုသို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကရင်မလင်နန်းတော်မှထုတ်ပြန်သည်။
ခေါင်းဆောင်များသည် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေး၊ နှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေး နှင့် စီးပွားရေး နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အခြေအနေများကို အလေးထားပြီး နက်ရှိုင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ပူတင်ကဆိုသည်။
ရုရှားနှင် ဘီလာရုဇ်အကြား စွမ်းအင်နှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ အပါအဝင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမည့် ကိစ္စများစွာရှိကြောင်း ပူတင်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။လူကာရှန်ကိုက အနောက်နိုင်ငံများသည် ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့ကို ကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေး ခိုင်မာအားကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်တွန်းအားပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း” မိမိတို့မှာကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်၊ အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ နည်းပညာရှိကြောင်း” အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
မတ် ၂၃ ရက် တွင် ပိုလန်နိုင်ငံ ၏ ရာသီဥတုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဖြစ်သူ Anna Moskwa က ပိုလန်နိုင်ငံသည် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် Yamal ပိုက်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ထောက်ပံ့မှု သဘောတူညီချက်ကို တရားဝင် ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းဆိုသည်။
သဘောတူညီချက်မှာ မူလ အတိုင်းဆိုပါက ယခုနှစ်ကုန်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ရုရှား-ယူကရိန်း ပဋိပက္ခ စတင်ကတည်းက ပိုလန်နိုင်ငံသည် ရုရှားနိုင်ငံမှ ကျောက်မီးသွေး၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ နှင့် ရေနံ တင်သွင်းမှုကို ရပ်တန့်မည့်အစီအစဉ်ကို ကြေညာခဲ့ပြီး ရုရှားနိုင်ငံက ဧပြီလတွင် ပိုလန်နိုင်ငံဘက်မှ သဘာဝဓါတ်ငွေ့များကို ရူဘယ်လ်ငွေကြေးဖြင့်ပေးချေရန်ငြင်းပယ်ခဲ့မှုကြောင့် ရုရှားဘက်က သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တင်ပို့မှုကိုရပ်တန့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
MOSCOW, May 24 (Xinhua) — Russian President Vladimir Putin said Monday that the Russian economy is withstanding the blow of Western sanctions “quite well” despite all the difficulties, as was evidenced by all the key macroeconomic indicators.
The Kremlin said Putin made the remarks during talks with visiting Belarusian President Alexander Lukashenko in Russia’s Black Sea resort city of Sochi.
According to Putin, the leaders met because the situations regarding the regional security, the security of the two countries, and the economy “call foraserious and profound conversation.”
Putin noted that Russia and Belarus have many spheres of joint work, including in sectors of energy and agriculture.
Lukashenko said that Western countries have given Belarus and Russia an impetus to develop their own economies more intensively, stressing that “we haveahuge market, resources, and technology.”
Also on Monday, Polish Minister of Climate and Environment Anna Moskwa said the country has formally canceled its contract with Russia on natural gas supply via the Yamal pipeline.
The contract would originally end at the end of this year.
After the start of the Russia-Ukraine conflict, Poland announcedaplan to end imports of Russian coal, gas and oil, while Russia in April halted deliveries of gas in retaliation to Poland’s refusal to pay for energy in ruble.